FOMBA HAMAFANA IREO VALINTENY AMIN'NY FIFANDRAISANA - VKONTAKTE - 2019
Ahoana no hanazavana valiny VK
Amin'ny habetsahan'ny tambajotra sosialy, Instagram dia mibaribary indrindra - serivisy malaza mikendry ny famoahana sary sy horonan-tsary, famoronana tantaram-baovao, fampielezam-peo, sns. Ny firafitry ny mpiserasera isan'andro dia novolavola tamin'ny kaonty voasoratra anarana. Amin'izao fotoana izao isika dia hifantoka bebe kokoa amin'ny olana rehefa sarotra ny mamorona profil vaovao.
Tahaka ny hoe ny fisoratana anarana amin'ny Instagram dia fomba tsotra, izay tsy tokony hisy olana. Na izany aza, raha ny zava-misy dia tsy mitovy ny zava-drehetra - isan'andro dia maro ireo mpampiasa no tsy afaka manatanteraka io dingana io, ary mety hiteraka olana maro izany. Ireto ambany ireto no handinihantsika ireo antony mahazatra izay mety hisy fiantraikany amin'ny fisian'ny olana heverintsika.
Hitanisa ity pejy ity Ahoana ny fisoratana anarana amin'ny Instagram
Antony 1: Ny profil Instagram dia efa mifandray amin'ny adiresy imailaka na nomerao finday
Voalohany indrindra, raha efa nahasoratra ny kaontinao Instagram amin'ny adiresy imailaka na nomeraon-telefaoninao ianao dia afaka mamaha ny olana amin'ny fomba roa: mampiasa adiresy imailaka hafa (finday) hanoratanao na hamafa ny kaontinao Instagram misy anao, ary afaka manoratra vaovao iray ianao avy eo.
Hitanisa ity pejy ity Ahoana no hamafana ny mombamomba an'i Instagram
Antony 2: Fifandraisana Internet tsy mety lo
Na dia izany aza dia manilika izany antony izany, fa raha miala amin'ny smartphone ianao dia ataovy izay hahazoanao fidirana amin'ny tambajotra. Raha azo atao, mifandray amin'ny loharanon'ny Internet, satria ny antony mahatonga ny olana dia ny tsy fahombiazan'ny tambajotra.
Antony 3: ny endriky ny fampiharana
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia voasoratra ao amin'ny tambajotra sosialy malaza amin'ny alàlan'ny fampiharana ofisialin'ny finday novolavolaina ho an'ny iOS, Android ary Windows rafitra fiasa.
Araho ny iray amin'ireo rohy etsy ambany ary jereo raha misy fanavaozana ny fampiharana misy anao ankehitriny. Raha izany no izy, mila mametraka izany ianao.
Download Instagram ho an'ny iPhone
Download Instagram ho an'ny Android
Ary fotoana vitsy monja momba ny dikan-teny maoderina momba ny fampiasana finday finday: raha mpampiasa iPhone ianao miaraka amin'ny iOS eo amin'ny version 8 na smartphone andro vitsivitsy eo ambany 4.1.1, dia tsy misy eo aminao ny andrana Instagram farany indrindra, izay midika fa Noho ny tsy firaharahian'ny rafitra miasa, manana olana amin'ny fisoratana anarana ianao.
Antony 4: anarana nomena anarana
Tsy afaka hamita ny fisoratana anarana ianao raha toa ka, rehefa mameno ny angon-drakitrao manokana ianao, dia manondro logiciel iray izay efa nampiasain'ny mpampiasa Instagram. Raha ny fitsipika, amin'ity tranga ity, ny rafitra dia maneho hafatra izay efa nahasoratra anarana ny mpisera iray toy izany, fa na dia tsy mahita an'io tsipika io aza ianao, dia tokony hanandrana safidy hafa azo atao, mba hahazoana manoratra amin'ny teny anglisy.
Hitanisa ity pejy ity Ahoana no hanovana ny mpampiasa anao amin'ny Instagram
Antony 5: Ampiasao ny proxy
Mpiserasera marobe mampiasa fitaovana amin'ny findainy (ordinatera) hanafenana ny adiresy IP tena izy. Ity hetsika ity dia ahafahanao mijery mora foana ireo tranonkala voasakana ao amin'ny firenena.
Raha mampiasa fitaovana proxy ianao eo amin'ny fitaovana misy anao, ny tranokala, ny fanampim-panafahana manokana na ny rindrambaiko maimaim-poana, dia manoro hevitra ny fanesorana ny votoatin'ny VPN na manandrana mamorona profil avy amin'ny gadget hafa.
Antony 6: Tsy nahomby ny fampiharana
Ny rindrambaiko dia mety tsy miasa tsara, ary ny dingana tena izy marina hamahana ny olana dia ny fanavaozana azy. Alefao tsotra ny fampiasa Instagram nalefa avy amin'ny smartphone. Ohatra, ao amin'ny iPhone, afaka ataonao izany amin'ny alàlan'ny mihazona ny rantsan-tànanao eo amin'ny sehatry ny fampiharana mandritra ny fotoana lava mandra-pahamehana ny tontolon'ny sehatra rehetra, ary tsindrio eo amin'ny sehatra miaraka amin'ny lakroa ary manamarina ny fanesorana ny fampiharana amin'ny gadget. Ny fametrahana fampiharana amin'ny fitaovana hafa dia atao amin'ny fomba mitovy.
Aorian'ny fafàna, afeno ny andohalin'ny Instagram farany amin'ny tranokala ofisialy ho an'ny fitaonao (azo jerena ao amin'ny lahatsoratra etsy ambony ny rohy download).
Raha tsy misy afaka manala ny fampiharana - dia soraty amin'ny alalan'ny tranonkala Instagram, izay azo alaina avy amin'ny navigateur amin'ny alalan'ity rohy ity.
Antony 7: tsy fahombiazan'ny rafitra miasa
Mihoatra lavitra kokoa, saingy matetika mahomby, ny famahana ny olana dia mamerina indray ny fanovana ao amin'ny gadjet mandeha amin'ny finday, izay tsy fahombiazan'ny fisoratana anarana. Ny dingana toy izany dia tsy hanaisotra ny fampahalalana maimaim-poana (sary, mozika, tahirin-kevitra, fampiharana, sy ny sisa), saingy hanamaivana ireo toe-javatra rehetra izany, izay mety hitarika fifandirana amin'ny asan'ny fampiharana sasany.
Esory ny safidy eo amin'ny iPhone
Sokafy ny fikandrana amin'ny findainao, ary mifidiana ny fizarana "Fototra".
Any amin'ny faran'ny pejy dia ho hitanao ilay singa "Reset"izay mila sokafana.
Hisafidy singa "Avereno ny toe-javatra rehetra"ary avy eo dia manamafy ny fikasanao hanatanteraka io dingana io.
Afaho ny fanovana ao amin'ny Android
Ho an'ny Android OS dia sarotra ny milaza ny marina hoe haverina amin'ny toeranao ny fikandrana, satria ny smartphones samihafa dia manana dikan-teny samihafa sy kiraron'ity rafitra ity, ary noho izany dia mety ho hafa tanteraka ny fahafahana miditra amin'io orinasa io.
Ohatra, ao amin'ny ohatra asehonao, mila manokatra ny fanovana eo amin'ilay fitaovana ianao ary mandehana any amin'ny fizarana "Advanced".
Amin'ny faran'ny varavarankely izay miseho, mifidiana "Avereno ary avereno indray".
Mifidiana zavatra iray "Famerenana ny fanovana".
Farany, mifidiana ny singa "Personal Information", aorian'izany dia azonao antoka fa eo ambany fiarovan'ny fifandonana eo akaikin'ilay teboka "Tsiaro ny fitaovan'ny fitaovana" mametraka toerana tsy mavitrika.
Antony 8: Ny olana eo amin'ny lafiny Instagram
Antony iray tsy fahita amin'ny olana, izay mety hikorontana amin'ny hetsika tsy misy ny fomba ambaran'ny lahatsoratra dia tsy afaka manampy anao hamaha ny olana amin'ny fisoratana anarana momba ny profil.
Raha tena eo amin'ny lafiny Instagram ilay olana, dia tokony ho voavaha ao anatin'ny fotoana fohy indrindra ny olana rehetra, izany hoe tokony hiezaka indray ny hisoratra anarana aorian'ny ora vitsivitsy na ny ampitso.
Ireo no antony lehibe mahatonga ny tsy fahafahana manoratra ny mombamomba anao manokana ao amin'ny tambajotra sosialy malaza. Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hamaha ilay olana.